ismaaciil maxamed cali – ismaaciil maxamed cali
ismaaciil maxamed cali
Author HNL86Posted on October 9, 2017 October 9, 2017 Leave a comment on First blog post
Bandhig carweedka dhaqanka oo lagu soo gaba gabeeyey muqdisho
Author HNL86Posted on October 14, 2017 October 14, 2017 Leave a comment on Bandhig carweedka dhaqanka oo lagu soo gaba gabeeyey muqdisho
Maxkamad ku taal dalka india oo dil ku xukuntay shabeel
Maxkamad ku taalla dalka Hindiya ayaa dil ku xukuntay shabeel afar qof ku dilay gobolka Maharashtra.
Dadka u dooda xuquuqda duurjoogta ayaa isku deyay in ay difaacaan shabeelka oo lagu xukumay in aragti lagu toogto, 23-kii June. Balse maxkamad kale ayaa maanta taageertay go’aankaa.
Shabeelka waxaa la qabtay bishii July, ka dib markii uu laba qof ku dilay afar kalena ku dhaawacay weerar uu ku qaaday deegaan ka tirsan magaalada Brahmapuri, ee gobolka Maharashtra.
Balse waxaa sii daayay laanta ilaalinta shabeellada, laba qof oo kale ayuuna dilay ka dib markii la siidaayay.
Dr Jerryl Banait, oo diidan go’aanka maxkamadda ayaa BBC-da u sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukunka maxkamadda sare.
Dadka u dooda xuquuqda duurjoogta waxay sheegeen in ay wanaagsanaan lahayd in deegaan kale la geeyo shabeelka. Laakiin cabsi badan ayay dadku qabaan.
Saraakiisha kaymaha oo raadinaya shabeelka oo lagu magacaabo Kala, waxay sheegeen in uu baxsaday oo uu jaray illaa 500km, tan iyo bishii July.
Hindiya waxaa ku nool boqolkiiba 60, shabeellada caalamka, taas oo halis ku ah deegaamada sii badanaya iyo ugaaratada sharcidarada ah.
Sidoo kale waxaa dila shabeelka dad u dhoofiya Shiinaha oo dadkiisu daawo ka sameystaan.
Ka dib markii degin laga sameystay meelihii ay ku noolaayeen, shabeelka wuxuu dadka kula dagaallamaa khayraadka, sida biyaha, taas oo sababta geeri.
Dilka Shabeelka ee Hindiya ayaa sare u kacay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Sanadkii 2015-kii, waxaa la sheegay in 80 shabeel la dilay, sanadkii ka horeeyayna 78 shabeel la dilay.
Author HNL86Posted on October 13, 2017 Leave a comment on Maxkamad ku taal dalka india oo dil ku xukuntay shabeel
Taliyaha militariga DFS oo tegay deeganka bariire
waxaa deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose gaaray Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Somaliya General Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid).
General Cirfiid ayaa waxaa safarka ku wehlinaayay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Somaliya, kuwaasi oo ka raacay Magaalada Muqdisho.
General Cirfiid, ayaa warbixino ka dhageystay Saraakiisha hogaamisa ciidamada Xoogga ee ka howlgala deegaanka Bariire, waxa uuna sidoo kale booqday dhammaan dhufeysyada ciidamada.
Socdaalka Cirfiid ayaa la xiriira arrimo ku aadan u kuurgalka xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka Xoogga dalka Somaliya ee deegaanka Bariire.
Maleeshiyaadka Shabaab ayaa dhawaan deegaanka Bariire ku laayey Ciidamo ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka Somaliya, kadib markii weerar qorsheysan halkaasi ay ku qaadeen.
Sidoo kale, Cirfiid ayaa Ciidamada Xoogga ee ka howlgala deegaanka Bariire ku dhiirageliyay inay dhawraan dadka shacabka islamarkaana ay ka feejignaadaan weeraro dhanka Shabaab kaga yimaado.
Author HNL86Posted on October 10, 2017 Leave a comment on Taliyaha militariga DFS oo tegay deeganka bariire
ismaaciil maxamed cali Blog at WordPress.com.